पाथिभरा एडभरटाईजिङ सँगै बेरोजगार हरुका लागी पाथिभरा जब लिंक शुरु गर्दै छु : पवन अधिकारी - Purbeli News
पाथिभरा एडभरटाईजिङ सँगै बेरोजगार हरुका लागी पाथिभरा जब लिंक शुरु गर्दै छु : पवन अधिकारी
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २६, २०७५ समय: १३:३९:२७
पवन अधिकारी (कार्यकारी प्रमुख, पाथिभरा एडभरटाईजिङ प्रा.लि सुनसरी )
प्रदेश १ मा छोटो समयमा सफल ब्यबसायीको परिचय बनाउन सफल ब्यक्ति हुनुहुन्छ सुनसरीको ईटहरीका पवन अधिकारी । करिब ३ दशक अघि सुनसरीको ईटहरी २ शान्तिनगरमा जन्मिनुभएका उहाँ एक दशक बढी समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । पत्रिकाको हकर देखि शुरु भएको उहाँको यात्रा करिब एक दशकमा सफल ब्यबसायी र सञ्चार उद्यमीका रुपमा परिचित बन्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यायमा समेत क्रियाशिल उहाँ स्थानीय स्तरमा सञ्चार उद्यमीका रुपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ । पाँच बर्षअघि स्थापना भएको पाथिभरा एडभरटाईजिङ प्रा.लि ईटहरीको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा रहनुभएका उहाँ छोटो अबधिमा राजधानी बाहिर सर्बोत्कृष्ट कारोबार गर्ने बिज्ञापन एजेन्सीका रुपमा परिचित भईसकेको छ । यतिबेला काठमाडौ बाहिरमा उत्कृष्ट कारोबार गर्ने एजेन्सीका रुपमा समेत परिचित बनेको छ । एजेन्सीको पाँचौ बर्ष प्रबेशको अबसरमा श्रीपञ्चमी अर्थात सरस्वती पुजाको अबसरमा यहि माघ २७ गते आईतबार बाट पाथिभरा जब लिंक समेत शुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ । एजेन्सी,जब लिंक लगायत समग्र मिडिया क्षेत्रका बारेमा अधिकारी सँग गरिएको कुराकानीका अंशहरु :
पछिल्लो समय के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
पछिल्लो समय नियमित काममै ब्यस्त छु । बिज्ञापन ब्यबसायीको हिसाबले भन्दा नियमति रुपमा सरकारी तथा निजि क्षेत्रका बिज्ञापनहरु प्रकाशन तथा प्रसारण नै पहिलो प्राथमिकता हो । केही सञ्चार माध्यायमहरुमा आबद्ध भएका कारण जनताको सुसुचित हुने अधिकारको सम्मान गर्र्दै सुचना प्रबाह गर्ने काम गरिरहेको छु । साथै पाथिभरा एडभरटाईजिङ प्रा.लि को पाँचौ बार्षिकोत्सको अबसरमा पाथिभरा जब लिंक को समेत बिधिवत उदघाटन गर्दै छु ।
पाथिभरा जब लिंक के हो र यस्का उद्धेश्य के हुन ?
मैले पत्रकारिता शुरु गरे देखि नै बिभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै सक्रिय भएँ । पछि एजेन्सी सञ्चालन गरेपछि जनसम्पर्क झनै बढेर गयो । त्यसै पनि हाम्रो देशमा बेरोजगारीको संख्या निकै ठुलो छ । रोजगारीकै अभावमा दैनिक सयौँ युवायुवतीहरु बिदेश जान्छन । पहिलो कुरा त नेपालमा रोजगारीको अबसर छैन । भएपनि बिभिन्न पार्टीको सिफारिस र अनेक भनसुन गर्नुपर्ने कारण रोजगारीका अबसरबाट बञ्चित भएका कारण दक्ष जनशत्ति बिदेश तर्फ पलायन भईरहेको छ । त्यो दक्ष जनशक्तिलाई रोक्न र यहि पनि रोजगारको अबसर सिर्जना गर्ने उद्धेश्यका साथ पाथिभरा जब लिंक शुरु गर्ने सोच बनाएको हुँ ।
अरु पनि त जब लिंक छन ईटहरीमा नयाँ चाँहि किन ?
अरु पनि छन,किन भन्नु भन्दा पनि पाथिभरा जब लिंक किन भन्दा चाँहि पहिलो कुरा त म ब्यबसायी मात्र नभएर यहाँको नागरिक पनि हुँ । म अरुबेला पनि बिभिन्न ठाँउका युवायुवतीहरुलाई जागिरमा दिइएकोे छु । कति दिन यसरी भनसुन मात्र गरेर जागिर लगाउने भन्ने सोचका साथ बैधानिक रुपमा कम्पनी नै दर्ता गरेर यो प्रक्रिया शुरु गरेको हुँ । म जागिर मात्र भन्दा पनि उनीहरुलाई कुनै पनि कामका बिषयमा तालिम दिई दक्ष बनाएर उनीहरुलाई जागिर दिलाउने हो ।
तपाईको एजेन्सीको अबस्था चाँहि के छ ?
मेरो एजेन्सी अहिले सम्म राम्रै छ । स्थापनाको पाँचौ बर्षमा पुग्दा राजधानी बाहिरबाट उत्कृष्ट कारोबार गर्ने एजेन्सीका रुपमा स्थापित भएको छु । देशका ३ वटा प्रदेशमा म यतिबेला काम गरिरहेको छु । अन्य प्रदेशमा पनि काम गर्ने तयारी गरिरहेको छु ।
अबका योजनाहरु के छन ?
सबैभन्दा पहिला त ब्यबसायलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने छु । ब्यबसायलाई थप मर्यादित र ब्यबस्थित बनाउने कुरामा समेत पहिलो प्राथमिकता हुने छ र साथै पाथिभरा जब लिंक लाई समेत बिस्तार गरी रोजगारीको खोजीमा रहेका दक्ष ब्यक्तिहरुलाई तालिम र रोजगारको समेत ब्यबस्था मिलाउने कुरामा जोड दिने छु । साथै बिभिन्न बित्तिय संस्था र माईक्रोफाईनान्स हरु सँग समन्वय गरी बित्तिय सचेतना सम्बन्धी तालिम र गोष्ठीहरु समेत आयोजना गर्ने तयारीमा छु । ब्यबसाय गरेर नाफा मात्र भन्दा पनि सामाजिक क्रियाकलापमा समेत नाफाको केही प्रतिशत खर्च गर्ने प्रण समेत गर्दछु ।